Bọchị 4 furu efu na |ntanetị | Martech Zone
Bọchị 4 furu efu na Internetntanetị
Sunday, Jenụwarị 25, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Kemgbe mgbede Wenezdee, nke a bụ oge mbụ m nwere ike ịnọdụ ala ma lee anya na enyo m. Tọzdee, ahụ ọkụ m bidoro na awa 48 sochirinụ bụ agbụrụ gbara agba iji gbalịsie ike idobekwu mmiri mmiri nke a na-achụpụ n'ike n'ahụ m.
Ọ dị m ka otu ọnwa agaala:
Iri puku kwuru iri puku tweets.
3,967 agụghị akwụkwọ na ndepụta m.
242 email na igbe nnabata m.
Ozi ịntanetị 73 na igbe ọrụ m.
Akwụkwọ ịkpọ oku 22, arịrịọ enyi 8 na igbe mbata 28 na Facebook.
Ozi olu 5 na ekwentị mkpanaaka m.
Ozi olu na ekwentị m.
Oge ezumike 1 oge ezumike na Onye isi ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ afọ gara aga.
Ọtụtụ ndị folks na-eche n'ezie otu mmadụ ga-esi jide ihe a niile wee rụọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Hapụ ụbọchị 4 nke ike na nkwụsi ike ga-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa n'ogologo, ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha m nwere, yana ọnụọgụ ndị Twitterers na-eso m - ọ nwere ike were izu iji weghachite ọnụọgụ ndị ahụ.
O siri ike karie idebe ihe a karịa ka ọtụtụ mmadụ chere… ma eleghị anya karịa karịa ka m chere! Ọbụna enwere m di na nwunye iwe oku si na ndị folks na-ekwu na ha enweghị ike ijide m ọ bụla ọkara. Oh kedụ ka m ga-esi chee na ụlọ ịsa ahụ m nwere teleconferencing.
Ọ bụrụ na ha abụrụ maka ihe ijuanya.
3.24% nke ndị ọrụ Facebook nwụrụ
Enwere Otu Magazin M Na-akwụ Maka: Wired
Jenụwarị 25, 2009 na 5:10 PM
Obi dị m ụtọ ịlaghachi n’ala ndị dị ndụ. Na "Mba!" gaa n'echiche tele-conferencing ahụ. Nke ahụ bụ otu ndepụta nke kwesịrị ịnọ ọchịchịrị ruo mgbe ebighị ebi!
Jenụwarị 25, 2009 na 5:36 PM
Dị nnọọ mma ịhụ ka ị mere n'akụkụ nke ọzọ nke ime ụlọ ịwụ - ya mere na-ekwu.
Echere m na oke egwu dị egwu ị wuru oge ga-eme ka ịghaghachi azụ ngwa ngwa n'ime ihe eji eme njem.
Obi ụtọ ịnụ na ị nọ na mgbazi ma ọ bụrụ na emezighị ya. 🙂
Jenụwarị 25, 2009 na 5:41 PM
Were ya dị ka ngọzi ịbụ onye na-enweghị nsogbu site n'ọtụtụ elele elektrọnik. Nabata azụ na ala nke mgbaàmà na-egbu maramara, na-anụ ụda ekwentị, tweets na-enweghị nkwụsị, na oge na-abịanụ. Nnọọ.
Jenụwarị 25, 2009 na 9:08 PM
Aga m emeghari ngagharị BNPositive na teleconferencing.
Jenụwarị 25, 2009 na 9:43 PM
enwere m ekele ọhụrụ maka ọtụtụ ọrụ ị na-arụ kwa ụbọchị. jisie ike ịchụkwudo, nwee olile anya na ọ dị gị mma.
Jan 26, 2009 na 8: 55 AM
Ma ugbu a, ịnwere ike ịgbakwunye na listi gị "Ihe 4 gụrụ maka blog post a". Nwere olileanya na ị na-adị mma!